प्रत्येक ४ मध्ये १ कर्णालीवासीमा जोर्नीको समस्या, ५ मध्ये १ नेपाली महिला पीडित, कुन प्रदेशमा कति ? – Health Post Nepal
प्रत्येक ४ मध्ये १ कर्णालीवासीमा जोर्नीको समस्या, ५ मध्ये १ नेपाली महिला पीडित, कुन प्रदेशमा कति ?
२०७६ मंसिर २९ गते ९:५१
समयको गतिसँगै मानिसको खानपान, रहनसहन, जीवनशैली, कामको प्रकृति र सोचमा निकै परिवर्तन आइरहेको छ । व्यस्तताका कारण मानिसले खाने परिकार, व्यायाम तथा आचरणमा त्यति ध्यान नदिइरहेको अवस्था छ । फलस्वरूप मानिस विभिन्न रोगको सिकार बनिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालीमा बढी देखिने स्वास्थ्य समस्यामा ढाडको हड्डी तथा कम्मर दुख्ने समस्याले प्रमुख स्थान लिइरहेका छन् । यस्तो समस्या २० वर्षे युवाअवस्थादेखि नै देखिन थालेको छ ।
ढाड तथा कम्मरको दुखाइ धपेडी, भारी उचाल्दा स–साना चोट थुप्रिएर वा हड्डी खिइएर पनि हुन सक्छ । सुरुमा कम्मर ज्यादै दुख्छ । पछि खोक्दा, हाच्छ्यूँ गर्दा वा दिसा गर्दा दुखाइ खुट्टासम्म पनि सर्न थाल्दछ । समान्यतया गर्दनको पछाडि (घिच्रो) र नितम्ब (हिप) बीचको मध्यरेखामा हुने दुखाइलाई ढाड दुख्नु भनिन्छ । मेरुदण्डको निर्माणमा सहभागी हड्डी र मांसपेशीलाई असर गर्ने रोग र अवस्थाले ढाड दुख्छ । यस्तो दुखाइ मेरुदण्डमा जहाँकहीँ पनि हुन सक्छ ।
१७ प्रतिशत नेपालीलाई जोर्नीको समस्या
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पछिल्लो एक वर्षको समस्यालाई लिएर जोर्नी तथा ढाडको दुखाइका विषयमा हालसालै एक सर्वेक्षण गरेको छ । सर्वेक्षणमा दुर्घटनाबाहेक अन्य कारणले एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म जोर्नी वा जोर्नीवरिपरि दुखाइ, अररोपन हुने, सुन्निने समस्या १७ प्रतिशतमा भएको पाइएको छ । यसमध्ये पुरुषमा १३.६ प्रतिशत र महिलामा २०.१ प्रतिशतमा यस्तो समस्या रहेको पाइएको छ ।
४ मध्ये १ कर्णालीवासीमा जोर्नीको समस्यामा, कुन प्रदेशमा कति ?
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशवासीमा सबैभन्दा बढी जोर्नीको समस्या पाइएको छ । कर्णालीका २५.९ प्रतिशत जनतामा जोर्नी वा जोर्नीवरिपरि दुखाइ, अररोपन हुने वा सुन्निने समस्या रहेको परिषद्को सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको अर्थ प्रत्येक ४ कर्णालीवासीमध्ये १ मा यस्तो समस्या छ ।
त्यसैगरी, जोर्नीको समस्याबाट कम प्रभावित प्रदेशमा प्रदेश ३ देखिएको छ । प्रदेश ३ का १२.३ प्रतिशत जनताले जोर्नीको समस्या झेलिरहेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिममा २५.६ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा १८.९ प्रतिशत, गण्डकीमा १६.६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १५.९ प्रतिशत र प्रदेश २ मा १२.२ प्रतिशत जनता जोर्नीको समस्याले पीडित रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
कसरी निम्तिन्छ जोर्नी तथा ढाडको समस्या ?
जोर्नी दुख्ने र सुन्निने रोग र उमेरअनुसार मेरुदण्ड खिइने र नसा थिचिने समस्याले ढाड दुख्न सक्छ । पछाडिको मांसपेशीमा तनावले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ जुन अत्यधिक भारोत्तोलन, अनुपयुक्त तरिकाले भारवहन, नमिल्दो आसन र नियमित व्यायामको कमीका कारण हुन्छ । मिर्गौलामा पानी जम्नु, मिर्गौलाको पत्थरी, मूत्राशय तथा मूत्रनलीको तल्लो भागमा संक्रमणले तल्लो ढाडमा दुखाइ हुन सक्छ । गर्भवती अवस्था, महिनावारी र महिनावारीपछिको समयमा सामान्यतया ढाड दुख्ने गर्छ ।
जोर्नी तथा ढाडको समस्या